Emepụtara ụdị SUSE Linux Enterprise 15 SP2 ọhụrụ | Site na Linux
Emepụtara ụdị ọhụrụ nke SUSE Linux Enterprise 15 SP2
Mgbe afọ nke mmepe, ndị folsị nọ na SUSE ekwuwaala mwepụta nke mbipute ohuru nke nkesa "SUSE Linux Enterprise 15 SP2", nke nchịkọta site na nke a ka ejirila mee ihe dị ka ihe ndabere maka nkesa nke obodo na-akwado OpenSUSE Leap 15.2.
Versiondị nkesa ọhụrụ a na-abịa na mmelite dị iche iche, mmezi ahụhụ, mana karịa ihe niile nwere mgbanwe dị oke mkpa.
1 SUSE Linux Enterprise 15 SP2 Key New Atụmatụ
SUSE Linux Enterprise 15 SP2 Key New Atụmatụ
N'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ anyị nwere ike ịchọta na ụdị ọhụụ a bụ Linux kernel mbipute 5.3 (na mbụ e nyere kernel 4.12) na nke a na-enye ezigbo oge Live Patching, nakwa dị ka mmelite nke Gaa na mbipute 3.34 (nke bụbu GNOME 3.26) yana ụdị emelitere nke PostgreSQL 12 na MariaDB 10.4 DBMS (yana nkwado maka Libxml ++ na Maven 3.6.2 ọba akwụkwọ).
Ma X nkesa na-ejikọkọta nkwado maka teknụzụ PRIME, nke na sistemụ GPU abụọ na-enye ohere ka enwee ike igosipụta isi ihe na GPU, yana na ngwa ahọpụtara iji jiri kaadị eserese mara mma.
Mgbe nọ Systemd nwere nkwado iji nyochaa okporo ụzọ n'ihe metụtara ọrụ, nke na-enye ohere nhọrọ IPAddressAllow na IPAddressDeny iji kọwaa ndepụta nke enyere na adreesị IP na subnets, na -emepụta usoro nchịkwa nnweta dị mfe.
Maka x86_64 na AArch64, a na-enye Igbe Ndị Ego, a obere set nke ngwugwu wu compact mebere gburugburu maka libvirt na VirtualBox iji Vagrant toolkit.
Banyere sistemụ x86_64, gbakwunyere nkwado nnwale maka "haltpoll" ọkwọ ụgbọ ala CPU, nke na-ekpebi mgbe a ga-etinye CPU n'ime ụdị nchekwa nchekwa miri emi, ọnọdụ miri emi karị, nnukwu nchekwa, mana ọ na-ewe ogologo oge ịpụ na ọnọdụ ahụ.
AppArmor emelitere na nsụgharị 2.13 na a tọhapụ na-agbakwụnye na nkwado maka profaịlụ tupu mkpokọta na caching na adị n'elu loading.
Banyere ihe ewepụrụ na nkesa, na ụdị ọhụrụ a eserese ọkwọ ụgbọala nkwado (UMS) ohere ndi ọrụ naanị. NkechiNaanị ndị ọkwọ ụgbọala nwere nkwado KMS fọdụrụ ma tinye mgbakwunye HP (hpsa) na LSI (megaraid) ngwaike ngwaike na libstoragemgmt.
Ezie na akụkụ nke mgbakwunye, anyị nwere ike ịchọta snkwado maka ngwaike ọhụrụ, gụnyere nhazi ọhụrụ sitere na Intel, Fujitsu A64FX, AMD EPYC, NVIDIA Tegra X1 / X2, na Raspberry Pi 4.
U-Boot bootloader maka mbadamba Pi (ngwungwu u-boot-rpiarm64) gụnyere nkwado nnwale maka usoro faịlụ Btrfs, nke na-enye gị ohere ịnweta akụkụ Btrfs ozugbo site na bootloader ma bufee kernel na ha na-enweghị ịmalite GRUB site na abụba nkebi.
Nke mgbanwe ndị ọzọ na-apụta ìhè nke ụdị ọhụrụ a:
Wepu nkwado maka PCMCIA, akara aka, FDDI, myrinet, arcnet, xp (specific IA64) na ESCON (IBM Z specific) network na YaST.
Ebugharịla usoro YaST maka onye ahịa NTP na nhazi usoro-nhazi kama cron. Ebugara sysctl nhazi na /etc/sysctl.d/70-yast.conf faịlụ.
Ewepu nkwado maka squashfs 3.x nkebi (kernel na-akwado naanị squashfs 4.0).
Gbakwunyere ọkwọ ụgbọala iji mee ka EDAC (Nchọpụta Nchọpụta na Ndozi) na ndị ọrụ AMD Zen 3.
Wepu nkwado maka interface ihe nketa microcode na-ebudata (/ dev / cpu / microcode).
Imirikiti nchịkọta gụnyere nkwado TLS 1.3.
Ebugara ngwugwu BIND, nginx, na wireshark ka ha jiri GeoLite2 adresị gaa na ebe nchekwa na ọba akwụkwọ libmaxminddb kama ịhapụ ihe nketa GeoIP, nke anaghị akwado.
N'ikpeazụ iji nweta nsụgharị ọhụrụ a, ị kwesịrị ịma nke ahụ nkesa bụ n'efu iji budata ma jiri, mana ịnweta mmelite na akara dị na oge ikpe ụbọchị 60.
Nbudata ntanetị bụ nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Emepụtara ụdị ọhụrụ nke SUSE Linux Enterprise 15 SP2
Ee, Ejirila m mmemme a. Ọ bara ezigbo uru na ọrụ. nwere ike ikwu.
na mkpa nke Rabato.com
Ya mere na ka oge na-aga ụfọdụ na-ekwu na ị gaghị ebi ndụ ma nweta ego na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ
Ntughari ohuru nke digiKam 7.0.0 biara na ndia bu akuko ya
Versiondị ọhụrụ nke ClamAV 0.102.4 na-edozi nsogbu 3